Alarobia 5 mey: mbola misy olona 847 miady amin’ny fahafatesana - ewa.mg
News - Alarobia 5 mey: mbola misy olona 847 miady amin’ny fahafatesana
Araka ny tatitry ny minisiteran’ny
Fahasalamam-bahoaka, omaly, mikasika ny valanaretina covid-19 eto
Madagasikara dia olona 5 indray no maty, ny alarobia 5 mey teo.
Nahitana tranga vaovao miisa 221 kosa tamin’ireo olona 761
nanaovana fitiliana ka teto Analamanga avokoa ny 129 tamin’ireo.
Tany Atsimo Andrefana ny 20 ary tao Bongolava ny 12…
Mbola misy tranga fahasarotana
arahi-maso akaiky ary miady amin’ny fahafatesana miisa 847 kosa
anefa eny amin’ireo hopitaly manara-penintra amin’izao fotoana.
Manao ny ainy tsy ho zavatra ireo dokotera sy ny mpiasan’ny
fahasalamana mamonjy ny ain’izy ireo. Olona taizan-aretina sy efa
zokiolona anefa ny ankamaroan’izy ireny. Ankoatra izany, mbola misy
olona 2.909 ihany koa manaraka fitsaboana eny anivon’ny CTC19 sy
nandalo teny amin’ny CSB.
Tetsy an-daniny, nisy ny sitrana
miisa 667 rehefa avy nanaraka ny fitsaboana, misy amin’izy ireo
tratran’ny tranga fahasarotana kanefa avotra soa aman-tsara
L’article Alarobia 5 mey: mbola misy olona 847 miady amin’ny fahafatesana a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 07/05/2021
Depiote Ratsimanosika Alexandre: « Efa akaiky ny vahaolan’ny Kraoma »
Nidina an-dalambe tany Brieville, distrika Andriamena, ny alahady teo, ny olona maromaro nanakana ny lalam-pirenena RN-33, mampitohy an’i Morarano Kraoma sy Andriamena.Naneho hevitra ny solombavambahoaka, voafidy tany Tsaratanàna, Ratsimanosika Alexandre, mikasika izany. Aminy, sokajina mpiasa mahery fihetsika ireto nanao fihetsiketsehana ireto. Mitombina ny fitakian’izy ireo satria mafy izany tsy nandray karama nandritra ny 12 volana izany.Na izany aza, tsy azo ekena ny fanakanana ny lalam-pirenena, ny lalam-bahoaka, satria natao hivezivezen’ny olona sy ny vokatra ireny. Efa niresaka tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana ny lehiben’ny distrikan’i Tsaratànana, saingy, tsy nisy ny marimaritra iraisana. Voatery, nandray andraikitra ny mpitandro filaminana, nandrava ny fanakanan-dalana ary nandefa baomba mandatsa-dranomaso, nanapariahana ny olona.Nilaza ity depiote ity fa tsapany tokoa ny olana sedrain’ireto mpiasa ireto ary anisan’ny niara-nitolona niaraka tamin’izy ireo ny tenany tany aloha. Aminy anefa, « toa nivadika zavatra hafa ilay raharaha satria lasa fanalana olona (ny tale jeneralin’ny Kraoma), nefa tsy tompon’andraikitra tamin’ny olana sedrain’ny Kraoma ity olona ity. Ny fitondrana teo aloha no nahatonga ny olana, ankehitriny ».Fankatoavana ny drafi-panarenanaNohazavainy fa fantatry ny fanjakana foibe tokoa ity raharaha Kraoma ity. Mitohy ny fifampidinihana tsy tapaka amin’ny governemanta, ny Praiminisitra, ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, ny holafitry ny filoham-pirenena, ny filoham-pirenena. Efa misy ny drafi-panarenana ary azoko antoka fa efa akaiky ny vahaolana. Anisan’ny andrasana ny fankatoavana ity drafitra ity avy amin’ny filan-kevi-pitantanan’ny Kraoma na ny avy any amin’ny prezidansa.Mikasika ilay orinasa tsy miankina hafa, APC, mitrandraka Kraomita any an-toerana, nilaza ny depiote Ratsimanosika Alexandre fa « tsy misy ifandraisany amin’ny olana diavin’ny Kraoma ny fitrandrahany. Manana taratasy ara-dalàna ity orinasa tsy miankina ity. Manana ny fitaovana koa izy ary azo lazaina fa mety hanampy amin’ny famahana ny olan’ny Kraoma aza ».Njaka A.L’article Depiote Ratsimanosika Alexandre: « Efa akaiky ny vahaolan’ny Kraoma » a été récupéré chez Newsmada.
Lalana Rocade-Est: hamafisina ny fantson-drano
Hamafisina ny fantson-dranon’ny Jirama manodidina ny lalam-baovao Rocade-Est. Misy afindra ny fantsona lehibe voakasiky ny fanamboaran-dalana vaovao, toy ny eny amin’ny kihon-dalana Nanisana ka miasa andro sy alina ny Jirama, nanomboka ny alatsinainy 17 aogositra teo.Harenina koa ireo simba rehetra, izay miteraka fahaverezan’ny rano sy manakely ny tosiky ny rano ho an’ny mpanjifa. Vinavinaina ho vita, omaly 18 aogositra ny asa ka hiverina amin’ny laoniny ny famatsian-drano amin’ireto toerana ireto: Ankerana- Ankadindramamy – Soamanandrariny – Ambatobe – Mandrosoa – Masinandriana – Analamahitsy Cité – Analamahitsy Tanàna – Andranobevava – Andrononobe – Andafiavaratra – Ambohitrarahaba – Antanandrano – Manjaka – Ambohipanja – Ankadikely – Ilafy – Antsampandrano – Andranovelona – Ambohitraina – Ambodivoanjo – Androhibe – Ampetsapetsa – Ivandry – Mahatony – Alarobia – Amboniloha – Soavimasoandro – Amorona – Ambaravarankazo.Njaka A.L’article Lalana Rocade-Est: hamafisina ny fantson-drano a été récupéré chez Newsmada.
Lasibatry ny daroka sy vono…: tovolahy iray kilasy famaranana saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Saika matin’ny fitsaram-bahoaka ity tovolahy iray kilasy famaranana ao Toamasina, isan’ireo mpiadina hanala bakalorea, amin’ny volana aogositra ho avy izao. Tratra teo am-pangalarana moto izy ka nanaovan’ny olona fitsaram-bahoaka…Efa leon’ny firongatry ny fanendahana miharo halatra moto mateti-pitranga ao Toamasina ny fokonolona. Manginy fotsiny ny fisian’ireo jiolahy tsy mijanona ela any am-ponja ka miverina manohy ny asa ratsiny indray. Tovolahy iray mpianatra kilasy famaranana ao amin’ny lycée tsy miankina iray ao Toamasina, miampy tovolahy telo hafa namany no nanendaka tovolahy iray nandeha moto tamin’iny lalam-baovao Mangarivotra iny, ny alahady alina teo. Lasan’ireo mpanendaka ny moto. Bajaj iray sendra nandalo no nitondra ilay tovolahy ka nanenjika ireto jiolahy avy aoriana niditra ny lalam-pasika mankany Ankirihiry parisela 11/25, saingy efa olona iray sisa mitondra azy. Nianjera tampoka noho ny lalam-pasika anefa ity jiolahy nitondra azy. Nifanjehan’ny fokonolona izy ka tsy lasa lavitra dia tratra. Nandritra izany, raikitra ny daroka sy ny vono nataon’ny fokonolona ary efa niseho teo koa ny ray aman-drenin’ilay tovolahy nangalatra moto. Efa saika hampidirina anatin’ilay Bajaj entina hovonoina any amin’ny takontakona ilay tovolahy, saingy tonga haingana teny an-toerana ny polisin’ny Fip naka azy.Sajo/J.CL’article Lasibatry ny daroka sy vono…: tovolahy iray kilasy famaranana saika matin’ny fitsaram-bahoaka a été récupéré chez Newsmada.
Fitantanana ny firenena: hifarana ny fialan-tsasatry ny governemanta
Tapitra, anio, ny fialan-tsasatry ny mpikambana rehetra eo anivon’ny governemanta. Namarana izany ny andiany faharoa, nanomboka ny 1 hatramin’ny 6 aogositra, raha nanomboka ny 26 hatramin’ny 31 jolay ny andiany voalohany. Nifandimbiasana ny fiantohana ny fampandehanan-draharaham-panjakana tao anatin’izany fotoam-pialan-tsasatra izany. Niantoka izany ny andiany faharoa rehefa nandeha ny andiany voalohany. Tahaka izany koa rehefa lasa niala sasatra ny andiany faharoa.Handray ny asany avokoa ny 7 aogositraTokony hiverina hiasa avokoa ireo minisitra rehetra, ny 7 aogositra, ary hiatrika ny filankevitry ny governemanta avy hatrany ny maraina ary hitohy amin’ny filankevitry ny minisitra ny tolakandro.Na izany aza anefa, tsy nahazo nivoaka an’i Madagasikara ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny avy amin’ny Fitsarana, ny Filaminana anatiny, ny eo anivon’ny Atitany ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena. Toerana tsy lavitra an’Antananarivo vita ao anatin’ny ora telo ny azon’izy ireo ialana sasatra ary tsy maintsy azo an-telefaonina amin’ny fotoana rehetra hatrany ireo minisitra vitsivitsy ireo.Maka bahana handeha mafimafy kokoaTsiahivina fa nisy ireo minisitra niasa sy tsy nandeha niala sasatra na teo aza io fanapahana noraisin’ny fitondram-panjakana io. Tsy eto an-toerana koa, efa herinandro mahery izao, ny filoha Rajoelina sy ny vady aman-janany fa niala sasatra any ivelany. Midika izany fa mbola mangingina aloha ny fiainam-pirenena amin’izao fotoana izao… Midika ho fakana bahana… Handehanana mafimafy kokoa?Synèse RL’article Fitantanana ny firenena: hifarana ny fialan-tsasatry ny governemanta a été récupéré chez Newsmada.